Kedu ihe kpatara na ndị ahịa anaghị agba ọsọ na Jaiku? | Martech Zone
Kedu ihe kpatara na ndị ahịa anaghị agba ọsọ na Jaiku?
Ọ bụrụ na ịnụbeghị banyere micro-ịde blọgụ, ị nwere ike ịga na saịtị m wee lelee n'akụkụ m n'akụkụ ebe ọ na-ekwu, "Doug on Jaiku". Micro-ịde blọgụ bụ nanị ikenye obere okwu nke mmasị na / ma ọ bụ ọnọdụ gị. Abụọ ndị isi egwuregwu na ahịa pụtara Twitter na Jaiku. Enwere esemokwu dị iche na ọrụ abụọ ahụ, mana m bụ onye na-akwado Jaiku n'ihi ike mwekota ya. Emechara m ngwa ọrụ a na ngwa mgbakwunye WordPress m maka Jaiku nke gafere nbudata 500 n'ụtụtụ a!
Ahịa na Jaiku:
Ihe tụrụ m n'anya n'ezie banyere Twitter, na karịsịa, nnabata Jaiku bụ na ndị ahịa na-ejidebeghị. Ọ bụ ụdị ogbi ma ọ bụrụ na ị jụọ m, ọ bụrụ na m bụ onye na-ere ahịa, m ga-eji teknụzụ a. Woot aghọwo saịtị na-aga nke ọma, na-enye otu azụmahịa kwa ụbọchị. Jungle Crazy bụ saịtị ọzọ nke yiri ka ọ nwere ụkwụ, na-enye a RSS na ị nwere ike ịdenye aha ma nweta azụmahịa kacha mma. Asịrị nwere ya Delta Airlines na-anwale Twitter, ma na ilele ibe ha - nsonaazụ ya dị ka ihe na-abaghị uru.
Ọ bụrụ na m bụ ụgbọ elu, aga m akpaaka izipu ihe ọpụrụiche nye onye ọ bụla, metụtara ọnọdụ, nri Jaiku. Cheedị Indianapolis-UA.jaiku.com ebe m nwere ike ịdenye aha ma hụ ọpụrụiche ọhụụ kachasị na-apụta na onye na-agụ ndepụta m. Ma ọ bụ ikekwe junglecrazy.jaiku.com ma ọ bụ ọbụna woot.jaiku.com. Ebee ka dell.jaiku.com ma ọ bụ sony.jaiku.com? Nnọọ? Kedu ihe ị bụ ndị ahịa na-eme n'ebe ahụ? Nke a bụ ohere ọla edo iwere usoro ọhụụ ma ị na-ehi ụra na wiil!
Fọdụ ojiji ndị ọzọ na-abụghị Marketing:
Nlekota oru - Cheedị na ị bụ Bochum na-eweta na ịchọrọ izipu ozi posts na sistemu ma ọ bụ mmezi sistemụ. Kedu ihe kpatara na ị gaghị enwe jumpline.jaiku.com ma ọ bụ dreamhost.jaiku.com ebe Dreamhost ma ọ bụ Jumpline Bochum na-azụ nri ọnọdụ usoro ọhụụ ya? Ihe magburu onwe ya bụ na a na-akwado Jaiku n'ebe ndị ọzọ… ya mere ọnọdụ ahụ nwere ike ịpụ mgbe ahụ.
N'ala nna Nche Iyi Egwu Ọkwa na Jaiku
Ngwaahịa na Jaiku
Mkpesa Tornado na Jaiku
Ebee ka unu niile no? Kulie! Have nwere ụfọdụ echiche ndị ọzọ?
Abụ m Djörk
Mee 19, 2007 na 3: 16 PM
Ndi mmadu choro Woot.Jaiku.com n'ezie? Nwere ike nweta nri na saịtị ha. Doug, echeghị m na ọ dị mfe dịka ịchọta ụzọ ọzọ iji bulie ngwaahịa / ọrụ gị na ọha mmadụ. Echiche maka jumpline ma ọ bụ ụlọ ọrụ nnabata ọzọ dị mma, mana nke ahụ agaghị arụ ọrụ maka mmadụ niile.
Foxgbọ Fox na-eji Twiiter eme ihe ugbu a. Ha na-eji ya dịka ụzọ iji mepụta obodo gburugburu ngosi ahụ, mana nke ka mkpa bụ maka ndị batara n'ụgbọala. Echere m na maka onye ọ bụla na-ere ahịa chọrọ iji Twitter ma ọ bụ Jaiku, ha kwesịrị ịnwa ịchọta obere obodo ma ọ bụghị naanị ihere na-atụgharị ngwaahịa ha. Ma nke ahụ bụ 2cents m.
Mee 19, 2007 na 10: 15 PM
Ekwenyere m na ọ kwesịrị ịbụ akụkụ nke atụmatụ zuru ezu. O juru m anya na teknụzụ ahụ anọla ọdụ nwa oge, nwee nnukwu nlebara anya, mana ndị ahịa anaghị eji ya eme ihe. Abụ m 'Integrated Marketing Strategy' kwere ekwe - nke a bụ naanị ibe ọzọ enwere ike ịgbakwunye na mgbaghoju anya!
Banyere Woot, echere m na ọ ga-akụ aka! N'ezie, ọ bụrụ na m bụ Twitter ma ọ bụ Jaiku, m ga-anwa ịnweta ihe ga-eso ha ugbu a!
Mee 20, 2007 na 9: 15 AM
M nọnyeere gị Douglas. Ekwuru m nke a na blọọgụ m obere oge, agbanyeghị na m na-ekwu maka Twitter n'oge ahụ.
Alpha geeks dika mu na gi nakweere ohuru ohuru dika jaiku na twitter ngwa ngwa lee ohere. O di nwute, anyi bi na onu, o were ndi ozo n’uwa ozo ijide.
Heck, ụlọ ọrụ na-aghọtazi mkpa nke blọọgụ!
Mee 20, 2007 na 7: 59 PM
Akwụsịrị m freelancing n'izu na-abịa ma bido n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Oru m bu ibi na onu weta ihe dika twitter / jaiku na tebụl ụlọ ọrụ. Enwere m olileanya na mkpụrụedemede m gee na-enweta ụlọ ọrụ mgbasa ozi iji mee ka usoro / teknụzụ na-agba ọbara ngwa ngwa. Ọ gaghị adị mfe, mana enwere ike ịme ya.
Mee 20, 2007 na 9: 45 PM
Kasị mma, Duane! New amalite bụ mgbe niile na-akpali akpali.
Mee 21, 2007 na 10: 04 AM
Daalụ Doug. Obi dị m ezigbo ụtọ ka m bi na NA-arụ ọrụ ogbe ndịda ugbu a.
Ọnye na -bụ Caroline Melberg?
Mee 21, 2007 na 10: 50 AM
Ndewo Doug - nnukwu akwukwo nke meghere anya m nke Twitter. Aga m ekweta na m mere ngwa ngwa ikpe ya na mbụ dị ka nzuzu igbu oge… post gị na ikike nke iji micro-blọọgụ si a ahịa echiche bụ ntụpọ-na… ị gbanwere echiche m na m ga-experimenting na Twitter na Jaiku dị ka nsonaazụ.
Achọrọ m ikele gị maka njikọ njikọta ole na ole - A nọ m n'etiti blọọgụ na-agafe WordPress nke mere na anaghị m aza ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị nwere ohere, lelee m emelitere blog na: http://www.smallbusinessmavericks.com/internetmarketing - Ọ ga-amasị m ịnụ ihe ị chere. (I nwekwara ike ịhụ ọkwa taa ebe m na-ejikọ na blọọgụ gị na nke a na Jaiku ọkachasị).
Daalụ maka nnukwu blog - jigide ọdịnaya dị ukwuu!
Mee 21, 2007 na 12: 33 PM
M hụrụ ọhụụ ọhụrụ n'anya! Emere m saịtị m na otu isiokwu ndabara (ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkọ). Daalụ nke ukwuu maka ụdị okwu ahụ!
Mee 21, 2007 na 11: 29 AM
Anyị na-agba mbọ ịchọpụta otu esi eji Twitter were na-ere ahịa otu egwuregwu baseball nke ụlọ ọrụ anyị na-akwado (www.unitedlinen.com) na maka ire ahịa asọmpi Baseball nke akpọrọ aha anyị. Anyị na-eche maka ịdebanye akara oge dị na njedebe nke mbata ọ bụla n'ime ụbọchị 5 ahụ yana ịdekọ akara maka ndị baseball otu oge ha.
Anyị na-agba mbọ ịchọpụta otu esi agwa ndị mmadụ etu esi aga twitter na ihe ha kwesiri ime iji bụrụ onye na-eso otu egwuregwu na nke asọmpi ahụ. Anyị emeela aha njirimara nke ULBraves na Twitter, mana nke ahụ bụ ihe anyị nwere. Anyị na-anwa…
Mee 21, 2007 na 12: 39 PM
Nke ahụ bụ nnukwu ụzọ iji ya! Nwere ike kpọsaa ndepụta Twitter na URL gị ma tinye akara ndị ahụ na ibe gị site na iji API ha ozugbo! Mee ka m mara ma ọ bụrụ na ịchọrọ aka - nke ahụ ga-abụ nnwale dị jụụ!
Mee 21, 2007 na 3: 14 PM
Ndi Woot na-agu blog m?
Mee 22, 2007 na 12: 12 AM
Dị ka ọtụtụ ederede banyere ikike ịre ahịa dị egwu nke Twitter et al, nke a enweghị ike iwepụta ọtụtụ ihe ọ bụla bara uru iji ya mee nke a na - enweghị ike ịme karịa karịa - na enweghị ike ịbịakwute ọtụtụ mmadụ - na mgbasa ozi ndị ọzọ.
Onu ahia ole ka ndi mmadu choro iziga ha tweets na ekwentị ha? Otu n'ime ndị na - ekwu okwu gị na - egosi onye na - eme ihe nwere ezi uche na Twitter - jiri ya dị ka ngwa ọrụ ụlọ - mana nke ahụ bụ ọrụ siri ike ma chọọ ụfọdụ okike na echiche. Ebe isi ozi gị na ihe atụ gị dị ka “hey, ka anyị tụfuo ihe niile n’elu nyiwe microblogging ma hụ ihe dị n’osisi!” obibia.
N'ikpeazụ, enwere ihe kpatara na ọtụtụ ndị ahịa anaghị agba ọsọ na Jaiku na Twitter: ha chọrọ ịgwa ndị ahịa ha okwu, ọtụtụ n'ime ha anaghị eji ihe ndị a. Ọ dịghị onye na-enubata na teknụzụ nke imirikiti ndị ahịa ya anaghị eji ma ọ dị ka ọ nweghị mmasị na ya.
Mee 27, 2007 na 12: 31 AM
Otu ihe edetu… woot na-elele teknụzụ a!
Na-ada na Jaiku
Aug 7, 2007 na 4:40 PM
Ajuju na-ele anya na ị nwere ike ịza ma ọ bụ duzie m n'ụzọ ziri ezi. Enwere m ebe nrụọrụ weebụ maka ndị nọ n'afọ iri na ụma maka mmemme ụlọ akwụkwọ na mpaghara nke m na-achọ iji twitter.
1. Anyị nwere “ndụ” peeji nke nwere olile anya na anyị nwere ike inwe ọtụtụ ụmụakwụkwọ na - ezigara ya ozi ma ọ nwere ike fesa ya na ihuenyo na projector.
2.A ga m achọ inwe ike iji otu usoro a maka ime nzukọ ebe ụmụ akwụkwọ / ndị mmadụ nwere ike ịkọwa echiche ha ma ọ bụ echiche ha na akaụntụ twitter na dịka ekwuru na mbụ, a ga-atụ ya n'elu mgbidi maka onye ọ bụla iji hụ ndụ. Mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị nwere echiche ọ bụla.
Aug 7, 2007 na 7:19 PM
Enwere ike ịme nke a n'ụzọ dị mfe. Enwere m koodu ntinye ị nwere ike ibido.
M ga - eme Jaiku Channel ma ị ga - akpọ ụmụ akwụkwọ gị niile na Channel ahụ. Enwere ike igosipụta ihe niile ha biputere - ma ọ bụ site na weghachite Channel ma ọ bụ site na igosipụta ndepụta RSS!